Ukuxobuka ebusweni nasemzimbeni ekhaya - Ngawaphi amanyathelo onokuwalandela? | IBezzia
Uyenza njani into yobuso obuhle kunye nomzimba ekhaya
USusana godoy | 13/10/2021 12:00 | Ubuhle
Mininzi imibala, iimveliso kunye namanyathelo ekufuneka siwathathile ukuba sifuna ukukhathalela ulusu kunye nokusinika olo nyameko. Yiyo loo nto elinye lala manyathelo Kufuneka ukuba ubuso kunye nomzimba uyaxobuka ekhaya. Kuba banayo yonke into esiyifunayo ngokwenene ukubonisa iziphumo ezinomtsalane ngakumbi.
Ngaba uyazi ukuba yintoni ubuso nobuso benyama? Siza kukutyhilela oko umntu ngamnye asizisela kona kwaye, amanyathelo okuphumeza iziphumo ezingcono kunokuba besilindele. Ungaphoswa yiyo yonke into elandelayo kuba ungayenza kamnandi ekhaya kwaye iyakumangalisa.
1 Ngaba ukubola komzimba nobuso kuyafuneka?
2 Ukucoca linyathelo lokuqala lolusu lwethu
3 Iimveliso ezithile kulusu lwakho
4 I-cream ehambisa amanzi engasilelanga njengesincedisi sobuso nomzimba ekhaya
Ngaba ukubola komzimba nobuso kuyafuneka?
Ewe kunjalo, ukubola kobuso kunye komzimba kuyafuneka. Ngoba? Kuba Ngale nto ilula siya kuyenza icocwe nzulu, isuse iiseli ezifileyo Ngokuqhwanyaza kweliso, ukuze ulusu luphinde luvuselele kwakhona kwaye luvele kwakhona luthambile kwaye lusempilweni. Ngokuqinisekileyo ukukwazi oku emva koko uyakuqonda ukubaluleka kwesimbo sobuhle esixhaphake ngolu hlobo. Kungenxa yokuba ukuba asithi ndlela-ntle kwiiseli ezifileyo, ngekhe sinike ulusu lwethu ithuba lokuzihlaziya kwakhona. Ke, siya kuthi ndlela-ntle kwimigca emihle kodwa nakwiziphene.
Ukucoca linyathelo lokuqala lolusu lwethu
Nangona ingelilo elokugqibela okanye inqanaba ekukuphela kwalo ekufuneka silithathile, kuya kufuneka sinikele ingqalelo kuyo. Kuba ulusu olucocekileyo ngenene lunokufumana isiseko sokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ke, ukuze uyicoce, akukho nto ifana nokubheja kwiimveliso ezisisiseko nayo Ukucoca iigel okanye amanzi emicellar. Le iye yaba yenye yezona mveliso zithengiswa kakhulu, kuba iyacoca ngokwenene kubunzulu kwaye ilungele ukushiya ngasemva ulusu lweoyile. Ngaphandle kokulibala ukuba nakwisenzo esinye ungatsho indlela yokuhombisa. Ngaphandle kokulibala ukuba iya kulungela nolusu olubuthathaka.
Iimveliso ezithile kulusu lwakho
Ukuze singabi nzima kakhulu kwaye ukubonwa komzimba kunye nokukhawuleza komzimba okanye okuthe ngqo, sinokuhlala sisebenzisa ezona mveliso zithile. Nje Sifanele siyisebenzise eluswini kwaye kube kanye kuyo, kuya kufuneka senze umthambo wesetyhula omnene ukuze imveliso ingene ngcono kakhulu kwindawo nganye. Kuyinyani ukuba le nkqubo inokwenziwa ngeemveliso esinazo sonke ekhaya ezifana neyogathi kunye namathontsi ambalwa ejusi yelamuni, umzekelo. Kuyinyani ukuba xa sikhetha iimveliso esizithengayo, siyazi kwimeko nganye ubungakanani okanye iingoma esizifunayo.
Ngaloo nto ukugqitywa kokugqitywa ezineemveliso ezithile sinokufikelela kwiziphumo ezilungileyo. Kuba ubumdaka buya kususwa phantse bungaqondanga. Into esisiseko kunye neyimfuneko ukuba sifuna ukubona kwakhona ukuba ulusu lwethu luhleli njani ngokuthamba.
I-cream ehambisa amanzi engasilelanga njengesincedisi sobuso nomzimba ekhaya
Ikhrimu yokuthambisa yenye yamaqabane ethu amakhulu kwaye siyayazi. Ke ngoko, akukho nto ifana nokusebenzisa lonke ixesha ukuyisebenzisa. Ngelixa kubalulekile kusasa nakubusuku ngabunye ukugcina ulusu lunamanzi, kule meko ngakumbi. Kungenxa yokuba emva kokwenza i-peeling kuya kuba kufanelekile ukuzama ukuthomalalisa ulusu lwethu. Ke, kufuneka sisebenzise leyo siyaziyo ukuba ilungile kuhlobo lwethu lolusu kwaye kunjalo. Ngeemveliso ezichanekileyo, ngamanyathelo amathathu nje kuphela uya kuba nakho ukwenza ukubonwa komzimba kunye nobuso ngendlela ebutofotofo. Kanye ngeveki kwaye uyakuqaphela utshintsho ngokukhawuleza!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Uyenza njani into yobuso obuhle kunye nomzimba ekhaya
Ndingazi njani ukuba ikati yam iyagula?